Cnaps: fiahiana sosialy tany Manakara | NewsMada
Cnaps: fiahiana sosialy tany Manakara
Laharam-pahamehan’ny fanjakana, ankehitriny, ny manome asa mendrika ho an’ny Malagasy rehetra, toy ny fiahiana sosialy, ohatra. Araka izany, natao ny 10, 11 ary ny 12 jolay teo tany Manakara ny fiofanana mikasika izany, nokarakarain’ny Tahirim-pirenena misahana ny fiahiana sosialy (CNaPS). Miisa 100 ny mpandray anjara, nahitana mpampiasa, mpiasa, mpiasam-piangonana, fikambanana tsy miankina.
Nilaza ny talen’ny CNaPS Manakara, Randriamamonjiarison Rivo, fa “tanjona ny ahalalan’ny mpampiasa sy ny mpiasa ny lalàna mifehy ny asa sy ny zon’ny mpiasa, ny fifanarahana asa, sns. Nahaliana ny mpiofana ny lafiny fahasalamana sy aroloza amin’ny asa (SST). Nampahafantarina ny mpiasa ny fomba famenoana antontan-taratasy, ny tombontsoa omen’ny CNaPS, toy ny fanampiana ny fianakaviana, ny tambim-bola ho an’ny tra-doza am-perinasa, ny fisotroan-dronono, sns.
Nambaran’i Tsiresimana Christian Berger, mpiasan’ny Inter AID Manakara, fa manampy betsaka azy ireo ity fiofanana ity, nahalalany ny zony sy ny an’ny fianakaviany ary ny fiarovana ny mpiasa. Ankoatra ireo, nitety orinasa tsy miankina tany Manakara hatrany Vohipeno ny vaomiera manokana “Task Force”, iarahan’ny CNaPS sy ny minisiteran’ny Asa, nanentana ny mpampiasa hanara-dalàna mikasika ny mpiasa.